Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị gbasara nchekwa, zụrụ gam akporo karịa iPhone | Gam akporosis
Ebumnuche nke nyocha gbasara amụma gbasara ihe nzuzo Android dị mma ugbu a karịa iPhone
Manuel Ramirez | | Noticias, Nche
Ọzọ teren ebe gam akporo gbagwojuru Apple ya iPhone. Oge a ọ dị na nzuzo na a ghaghi iburu n'uche ihe ọ bụla metụtara nzuzo. Ma ọ bụ na ndị nchọpụta gbasara nyocha na-ekwu na ekwentị gam akporo siri ike "mbanye" ma ọ bụ "ịgbawa" karịa iPhones.
N'oge ọ mara na Gọọmentị America enweela ike ịgafe dịka n'ụlọ site na izo ya ezo nke iPhone, dị ka ekwuputara na nso nso a site na Vice. Mana ọ dị ka ọ na-esiwanye ike "ịbanye" ụfọdụ ekwentị gam akporo. Na nke a bụ eziokwu na-eme ka anyị mpako na-eme ka anyị ntị bara uru karị.
1 Emeghe iPhone
2 Na android ihe siri ike karị
Ọ bụ Detective Rex Kiser, onye na-eme nyocha nyocha ọhụụ maka Ngalaba Ndị uwe ojii Fort Worth, nke na-ekwusi ike na otu afọ gara aga ọ nweghị ike "ịbanye" na iPhone, mana ọ nwere ike ịme ya na ekwentị gam akporo niile.
Dị ka ọ na-aersụrị ugbu a, ugbu a ha na-apụghị etinyere na ọtụtụ gam akporo mobiles. Dabere na nyocha nke Vice, Cellebrite mere, otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mkpa maka ụlọ ọrụ gọọmentị mgbe ọ na-abịakwute "smartphones" smartphones, nwere ngwa ọrụ nwere ike imeghe ọnụ ụzọ nke iPhone ọ bụla arụpụtara, ọbụlagodi iPhone X.
La ngwá ọrụ dịịrị maka ịnakọta data dịka ndekọ GPS, ozi, akụkọ oku, kọntaktị na ụfọdụ ụfọdụ data sitere na ngwa dịka Twitter, LinkedIn ma ọ bụ Instagram. Site na ozi a niile dị na ọ dịrị ha mfe ịgbaso eziokwu ndị omempụ na ndị na-abụghị mgbe ụlọ ọrụ nwere ike ịchọ data n'aka onye ahịa ma ọ bụ ozi nzuzo ahụ; Anyị agaghị abụ ndị nsọ ma ọ bụ ihe ọ bụ.
Na android ihe siri ike karị
Otu ihe ahụ Cellebrite ngwá ọrụ eji na Android izo ya ezo ọ bụ obere ihe ịga nke ọma na ndị nwere aha ọma. Anyị na-ekwu maka njedebe dị elu. Dịka ọmụmaatụ, onye nyocha ahụ na-etinye ya na ngwaọrụ ndị dị ka Google Pixel 2 ma ọ bụ otu Samsung Galaxy S9, ngwá ọrụ ahụ enweghị ike wepụ data sitere na netwọk mmekọrịta, akụkọ nchọgharị nchọgharị nke ihe nchọgharị ma ọ bụ ndị metụtara GPS. Ọ bụrụ na anyị gaa na Huawei P20 Pro, enwere ike ịsị na ọ nweghị ike wepụ data ọ bụla.
Onye na-achọpụta ihe n'onwe ya na-eme ka mmelite ndị ọhụrụ nke Android bụ ndị ọzọ "na-eguzogide ọgwụ" mgbe ọ na-agbachitere onwe ha megide mwakpo ndị a iji wepu data sitere na mobiles ha tinyere. Nke a mere ka o doo anya etu ụlọ ọrụ si eme ihe ha nke mere na ụlọ ọrụ gọọmentị nwere oge siri ike "ịbanye" ekwentị ndị ahụ iji wepụ ihe ha chọrọ. Ya mere enwere nzuzo dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ dịka Huawei na Samsung.
A ghaghi ikwu ya na obu ezie ka anyị nwere otu nke ọhụrụ gam akporo igweEkwesiri ime ka o doo anya na oputaghi na odi nkpa izere idi ihe ndi ozo. Naanị n'ihi na Cellebrite n'onwe ya anaghị arụ ọrụ apụtaghị na ndị nchọpụta enweghị ike iwepu data ha chọrọ. Naanị na usoro ahụ nwere ike ịdị na-arụsi ọrụ ike ma werekwu oge na akụrụngwa. Anyị amataworị na nke a pụtara ego dị elu maka ma ndị na-agba ọrụ ma ndị na-enye ha.
Ihe doro anya bụ na ugbu a, elu nke gam akporo dị nnọọ mma karịa ndị ọzọ nke nwere ike ibu ihe iPhone. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere nchekwa, ị maraworị ebe ị ga-aga, gaa maka gam akporo dị elu ma gafee usoro ndị a iji soro ihe niile gbasara sistemụ arụmọrụ kachasị arụ ọrụ n'ụwa. Ihe anyi na akwado bu ka eme ka ekwenti gi dika ihe di ọ na-eme na Realme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ebumnuche nke nyocha gbasara amụma gbasara ihe nzuzo Android dị mma ugbu a karịa iPhone
Ihe kacha mma "Battle Chess" nke afọ bụ ebe a: Ike & Ime Anwansi Chess Royale na egwuregwu ya n'etiti ndị egwuregwu 100
Samsung rere ihe ruru nde 2019 smartphones na 300